Iswiidhen oo la dhaleeceeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
KRITIK MOT SVERIGE MOT FÅNGÖVERLÄMNING
Iswiidhen oo la dhaleeceeyey
La daabacay torsdag 27 augusti 2009 kl 17.26
Sawirro jirdil ah oo ey soo bandhigtey heyadda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty. Foto: Amnesty International.
Heyadda xuquuqda bani'aadamka ee Amnesty ayaa dhaleeceeyn dusha kaga tuurtey Iswiidhen, dhaleeceeyntaasina la xiriirto in ciidammada dalkan ka jooga Afgaanistaan ey gacanta u geliyeen maamulka dalkaa maxbuus ey gacanta ku dhigeen ciidanka Iswiidhen. Waddammada falal noocaasiya ku dhaqaaqa waxey gacan ka geeystaan jirdilka, sida ey sheegtey heyadda u doodda xuquuqda bani'aadamka ee Amnesty.
Sida ku cad shuruucda caalamiga in aan maxbuus lagu wareejin Karin dawlad ama maamul looga shaki qabo iney jir dil u geeysan karaan/doonaan maxbuuska gacanta loo geliyey. Waana amuurta ey heeyadda Amnesty ku dhaleeceeyneyso dawladda Iswiidhen maadaama ey ciidammada halkaa ka jooga oo bishii Luulyo maxbuus gacanta ku dhigey u gudbiyeen maamulka dawladda Afgaanistaan.
- Waa xaqiiq la hubo in warbixinnada la hayo loo geeysto jir-dil maxaabiista. Markaa wxuu sharciga caalamiga ahi qorayaa in aan wax maxaabiis ah lagu wareejin maamulka.
Sida ey sheegtey madaxa heyadda Amnesty ee dalkan Iswiidhen Lisa Berg.
Dalka Iswiidhen oo ey carriga afgaanistaan ka joogaan dhowr boqol oo ka tirsan ciidammada milateriga, ayaa hoos yimaada maamulka ciidanka nabad ilaalinta ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaanno ISAF, hase yeeshee aan illaa iyo hadda wax heshiis amuurtaa ku saabsan aan dawlad ahaan ula gelin dalka Afgaanistaan ee cidammadaasi ku sugan yihiin iyo sidii laga yeeli lahaa haddii ey maxaabiis dagaal ku qabtaan, hase yeeshee ey socdaan hoowlo la xiriira heshiis noocaasiya.
- Dal walba masuuliyad ayaa ka saaran falalkiisa. Sidoo kale dalkan Iswiidhen waa inuu masuuliyaddaa qaadaa. Aanuna maxaabiis u faragelin heyadaha ammaanka ee dalka Afgaanistaan. Sida ey sheegtey Lise Bergh.
Ciidammada Iswiidhen ayaa ka hoowlgala ciidanka nabad ilaalinta ee heyadda Qaramada Midoowdey, eyna uuna hogaamiyo ururka milateriga ee Nato (ISAF) International Security Assistance Force - Ciidanka nabad ilaalinta caalamiga.
Illaa hadda waxaa dalkan kaga sugan dalka Afgaanistaan ciidan gaarsiisan illaa iyo 400, iaydoona lagu tala jiro in la gaarsiiyo illaa iyo 500.
Hoowlgalka ciidankan ayey go'aankeeda laheyd heyadda ammaanka ee Qaramada Miodoowdey.
Ciidanka nabad ilaalinta ee ISAF ayaa gaareya 50 000, oo ey ka qeeyb qaataan ciidammo ka socda afartameeyo dal, dalkan Iswiidhenna uu ka mid yahey.
Dalka Iswiidhen wuxuu sidoo kale taakuuleeyn ballaaran ee dhaqaale geliyaa dalka Afgaanistaan. Sannadkan eynu ku jirno ee 2009 ayuu dalkani u qoondeeyey dhaqaale gaarsiisan 400 oo malyuun oo koronka iswiidhoshka, looguna tala galey waxyaabo ey ka mid yihiin waxbarashada dheddiga iyo caafimaadka.